ကျွန်ုပ်တို့ညစ်ညမ်းသောအကြောင်းအရာနှင့်ပတ်သက်ပြီးကျွန်ုပ်တို့ပြောဆိုနေခြင်းမဟုတ် (Washington Post) - သင်၏ ဦး နှောက်ပေါ်ပေါက်ခြင်း
ကျနော်တို့ porn (ဝါရှင်တန်ပို့စ်) အကြောင်းကိုရှိခြင်းမဟုတ်နေစကားလက်ဆုံ
အလက်ဇန်းဒါး Rhodes ၏တည်ထောင်သူဖြစ်ပါတယ် NoFapတစ်ပလက်ဖောင်း porn ဆေးလိပ်ဖြတ်ချင်သူကိုလူတို့အဘို့ကိရိယာများနှင့်ထောက်ခံမှုပေးရန်အပ်နှံလိုက်တယ်။
မကြာသေးမီကတစ် nonbinding resolution ကို Utah ရဲ့ပြည်နယ်အောက်လွှတ်တော်နှင့်အထက်လွှတ်တော်မှတဆင့်တညီတညွတ်တည်းမဲကအတည်ပြုညစ်ညမ်းတဲ့ "ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးအကျပ်အတည်း" ကြေငြာများနှင့်အစိုးရအုပ်ချုပ်ရေးမှူးဂယ်ရီဟားဘတ်တို့ကလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ကြသည်။ တုန့်ပြန်, အင်တာနက် comments ၏တိရစ္ဆာန်စုဟာဥပဒေပြုနှင့်၎င်း၏ကျမ်းပိုဒ်အဘို့တွန်းအားပေးခဲ့သူတက်ကြွလှုပ်ရှားသူများသို့ဆုတ်။ , မကြာခဏသူတို့ကရှိစေခြင်းငှါမဆိုသက်သေအထောက်အထား-based ကုသိုလ်ယူလျစ်လျူရှု, သီအိုကရေစီသို့မဟုတ်ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးမူဝါဒအအဖြစ်ဖြင့် Information ကိုယ်ကျင့်တရားဝါဒအဖြစ် resolution ကိုလျှော့။
လူတွေဆုံးဖြတ်ချက်နောက်ကွယ်တွင်သူတို့၏အနောက်ခံသို့မဟုတ်တွန်းအားနှင့် ပတ်သက်. ၎င်းတို့၏သံသယခွင့်ရှိသည်နေစဉ်, ဒီသည်၎င်း၏အငြင်းပွားမှုများနောက်ကွယ်မှဆင်ခြင်ခြင်းဖြေရှင်းမပေးပါဘူး။ အဖြစ်မှန်မှာတော့ညစ်ညမ်း၏ဝေဖန်မှုများဘာသာရေးနှင့်စာရိတ္တလုပ်ဆောင်ရမှာတွေ။
အင်တာနက်ကညစ်ညမ်းသောလူသားမြား '' ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်အချိန်ဇယားနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါအထူးသဖြင့်အခါ, တစ်ဦးအလွန်မကြာသေးမီဖှံ့ဖွိုးတိုးတဖြစ်ပါသည် - နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ဦးနှောက်လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်သေးရှိသည်။ porn ထုတ်လုပ်သူများအစဉ်အဆက်ကိုပိုမိုပေါများဖြစ်ကြောင်းအော်ဒီယိုပုံရိပ်ယောင်အတွေ့အကြုံများဖွံ့ဖြိုးဆဲ, နေရာအနှံ့, ဝတ္ထုနှင့်လှုံ့ဆော်နေ့တိုင်းအလုပ်မှာခက်ခဲရှိပါတယ်။ တစ်ဦးအဝလွန်ခြင်းကပ်ရောဂါတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုထွက်ခွာ - - နည်းတူအမြန်အစားအစာ franchise ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဦးနှောက်ရဲ့ဆုလာဘ် system ကိုပစ်မှတ်ထားကြောင်းဒြပ်အရသာ, အနံ့နှင့်ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံဖွံ့ဖြိုးဆဲတို့၏စားချင် hacked porn ထုတ်လုပ်သူများ, HD ဗီဒီယိုကိုကြိုက်သည်အသစ်သောနည်းပညာတွေနှင့်အတူကျွန်တော်တို့ရဲ့လိင်စိတ် hack ဖို့သင်ယူနေကြခြင်းနှင့် virtual reality။ ဒါဟာခဏနားပြီးကျန်တာတွေကိုသူတို့ရဲ့လက်ရာကျွန်ုပ်တို့၏အသက်တာကိုထိခိုက်စေမည်အကြောင်းတည်းဘယ်လိုကိုယျ့ကိုယျကိုမေးရန်မိုမဟုတ်ပါဘူး။
Over-စားသုံးသည်အင်တာနက်ညစ်ညမ်း၏ဆိုးကျိုးများကိုလည်းမှတ်တမ်းတင်ဖြစ်ရပ်ဆန်းဖြစ်ပါတယ်။ porn ရဲ့ရိုင်းလူကြိုက်များနှင့်အတူဤပေါင်းစပ်နှငျ့သငျစစ်မှန်သောပြည်သူ့ကျန်းမာရေးစိုးရိမ်ပူပန်မှုတစ်ခုစာရွက်ရှိသည်။ porn ပြဿနာများနှင့်အတူတစ်ဦးချင်းစီဆက်ဆံရေးကို, မိသားစုများ, အလုပ်ခွင်နှင့်လူမှုအသိုင်းအဝိုင်းအဖွဲ့ဝင်များဖြစ်ကြသည်, ဒါကြောင့်တစ်ဦးချင်းစီ porn ပြဿနာများလူ့အဖွဲ့အစည်းပြဿနာများဖြစ်လာမှတက် trickle ။ အဆိုပါပြဿနာအနည်းငယ်တစ်ခုလုံးအဖြစ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့လူမှုအသိုင်းအဝိုင်းအပေါ်တစ်ဦး deleterious အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိသည်ကြောင့်သူတို့ကိုနှင့်ဆက်ဆံသောသူမည်သည်တစ်ခုစွဲရှိပါတယ်ဒါပေမယ့်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ပြီးနောက်ရှိသမျှတို့, ကျနော်တို့အလေးအနက်ကိစ္စများအဖြစ်မူးယစ်ဆေး, အရက်နှင့်လောင်းကစားမဟုတ်ဆက်ဆံပါ။
တစ်ဦးချင်းစီထောင်ပေါင်းများစွာ၏မကြာခဏငယ်ရွယ်ပြီးအထီး, တစ်နေ့လျှင်အကြိမ်ပေါင်းများစွာ porn ကို အသုံးပြု. မဟုတ်ဘဲလူသားနှင့်အတူလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုထက်, သူတို့ရဲ့ကွန်ပျူတာဖန်သားပြင်ပေါ်မှာ pixels ကိုနှင့်အတူ၎င်းတို့၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပေါင်းသင်းဖို့သူတို့ရဲ့ဦးနှောက်လေ့ကျင့်သင်ကြားကြောင်းသတင်းပို့ရသည်။ သူတို့ကလူ့မိတ်ဖက်ထုတ်ရှာကြံအတွက်လျော့နည်းသွားအကျိုးစီးပွားရှိသည်, သူတို့ဒီတော့ကျင့်ကိုကျင့်လျှင်, သူတို့ကမကြာခဏပူးပေါင်းလိင်စဉ်အတွင်းလိင်စိတ်နိုးထအောင်မြင်ရန်မနိုင်, အပျြောအပါးမှတစ်ဦးလျော့နည်းသွား sensitivity ကိုရှိသည်သို့မဟုတ် porn သို့မဟုတ် porn စိတ်ကူးယဉ်ခြင်းမရှိဘဲတစ်အော်ဂဇင်ကိုတွေ့ကြုံခံစားနိုင်ဘူးကြောင်းသတင်းပို့ရသည်။ စိတ်ဝင်စားစရာအလုံအလောက်, ဤလူသူတို့ဘဝကနေတစျခု variable ကိုဖယ်ရှားပစ်ကြသောအခါ - porn ကိုအသုံးပြုပြီး - အချိန်အများစုမှာမိမိတို့၏ရောဂါလက္ခဏာတွေလျှော့ချသို့မဟုတ်ကပြောင်းပြန်ဖြစ်နေသည်။
သူတို့ရဲ့ဆွေးနွေးချက်များနောက်ဆုံးတော့သုတေသီများ, Clinician နှင့်စာနယ်ဇင်းသမားများရဲ့စိတ်ဝင်စားမှုကိုရေးဆွဲခဲ့ကြသည်။ သူတို့ရဲ့တိုင်ကြားချက်မှတုံ့ပြန်မှုများတွင်အချို့သောကောင်းသောသုတေသနကဲ့သို့သော, porn စွဲ၏ဆိုးကျိုးများအပေါ်ဆဲဖြစ်ပါသည် အဆိုပါ 2014 တက္ကသိုလ်ကင်းဘရစ်၏လေ့လာမှု အဆိုပါ porn-စွဲဦးနှောက် porn မှဓာတ်ပြုပြီးကြောင်းပြသရန်ပြုလုပ်အသုံးပြုသောဦးနှောက်ပုံရိပ်မူးယစ်ဆေး-စွဲဦးနှောက်မူးယစ်ဆေးတွေကိုမှဓာတ်ပြုပြီးအတူတူပင်လမ်းတွေကို။ သို့သျောလညျးအခြို့သောဝေဖန်သူများက porn စွဲနေတဲ့ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးပြဿနာ, ဒါမှမဟုတ်ပင်အမှန်တကယ်ရောဂါသောစိတ်ကူးကိုထောကျပံ့ဖို့လုံလောက်တဲ့သက်သေအထောက်အထားမျှမဖွင့်ဆိုကြသည်။ porn စွဲ၏တည်ရှိမှုအတည်ပြုကြောင်းရရှိနိုင်ပါသည်သုတေသန၏ပဒေသာပြီးသားရှိစဉ်အခါ, နောက်ထပ်သုတေသနရန်ပုံငွေ, ကျင့်ဝတ်ကော်မတီကခွင့်ပြုချက်နှင့်အဆန္ဒရှိစမ်းသပ်ဘာသာရပ်များလိုအပ်ပါလိမ့်မယ်။
ယခင်ကအွန်လိုင်းဖိုရမ်များနှင့် Clinician နှင့်ညစ်ညမ်း-စွဲ client များအကြားလျှို့ဝှက်အစည်းအဝေးများမှကန့်သတ်ထားပြီးကြောင်းဆွေးနွေးမှု - ဤအမှုအရာဘာသာရပ်နှင့် ပတ်သက်. ပွင့်လင်းဆွေးနွေးမှုလိုအပ်ပါတယ်ရသောအများပြည်သူအကျိုးစီးပွား, လိုအပ်သည်။ "အင်တာနက်ကိုဂိမ်းရောဂါ" ဟုအဆိုပါ Diagnostic နှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ Disorders ၏စာရင်းအင်းလက်စွဲထဲမှာမှတ်တမ်းတင်လျှင်, အဘယ်ကြောင့်မဟုတ် "အင်တာနက်ကညစ်ညမ်းစွဲ"?
utah ရဲ့ resolution က porn တခုတခုအပေါ်မှာအကဲဆတ်သောတားမြစ်ချက်အဘို့ပဌနာ, ဒါပေမယ့် "မူဝါဒကိုအပြောင်းအလဲ" အတွက်ပွင့်လင်းဘာသာစကားခေါ်ဆိုမှုအံ့သြငါတို့အားလုံးကိုထားခဲ့ဖို့လုံလောက်မရေမထားဘူး။ ဥပဒေပြုမှတဆင့်ညစ်ညမ်းစွဲဖို့အကောင်းဆုံးချဉ်းကပ်နည်းဖြစ်သနည်း စင်စစ်မဟုတ်, ထိုဥပဒေပြဌာန်းညစ်ညမ်းလောင်ဖို့လူ၏လက်ျာမှုပိတ်ပင်ဖို့ဦးဆောင်လျှင်။ အဘယ်အရာကိုငါတို့သည်ငါတို့၏အခမဲ့အချိန်ကာလအတွင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့လိင်အင်္ဂါကိုပြုသဖြင့်အစိုးရထိန်းညှိရန်အဘို့အဒေသများရငျးနှီး, လိင်, မေတ္တာနှင့်မရှိကြပေ။ သို့သျောလညျး, အသိအမြင်မြှင်ပွင့်လင်းဆွေးနွေးမှုလွယ်ကူချောမွေ့နှင့်သုတေသနဖွင့်ရည်ရွယ်ဥပဒေပြဌာန်းရှာဖွေစူးစမ်းကျိုးနပ်သည်။
လက်တွေ့ကျကျ, Utah အတွက် resolution ကိုအဆိုပါ porn-ပြန်လည်နာလန်ထူအသိုင်းအဝိုင်းအဘို့ကြီးသောဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအောက်မှာ-ဆွေးနွေးတင်ပြခေါင်းစဉ်နှင့် ပတ်သက်. ဆွေးနွေးမှုတစ်စင်းအား၎င်း၏ရည်ရွယ်ချက်ဝတ်ပြုကြ၏။ Utah ရဲ့ကြေငြာကျနော်တို့နှစျသိမျ့ဘို့အလိုငှါရှုပ်ထွေး, မညီကြောင်းဘာသာရပ်များကိုရှောင်ကြဉ်ရသောအခါကျနော်တို့လူ့အဖွဲ့အစည်းအစေခံမနေ့၏အဆုံးမှာ, သဘောထားကွဲလွဲဖြစ်ပေါ်စေနေစဉ်။ ကျနော်တို့ကမျိုးစိတ်အဖြစ်ပြဿနာတွေနဲ့တိုးတက်မှုဖြေရှင်းဖို့ပေါ်ပေါ်ထင်ထင်ဤအရာများကိုအကြောင်းပြောဆိုရန်လိုအပ်ပါသည်။ ထိုအဟုတ်, ထိုညစ်ညမ်းပါဝင်သည်။